Ime bụ ebe anyị na-anọ ukwuu n'oge anyị, ma na-achọ ime ka ike kasị eleghara anya mgbe ọ na-abịa decorating. Naa, ego nwere ike ịbụ a ịrịba ihe na-akpata! Lee ụfọdụ oké Atụmatụ maka brightening gị ohere na-enweghị ego mgbe nile!
1.megharia! A ọhụrụ ọhụrụ ndokwa mgbe nile na-eme ka a ụlọ na-eche ọhụrụ. Atụla egwu na-agbalị ọhụrụ akụkụ maka gị ngwá ụlọ na-edebe gị bed on a diagonal, ma ọ bụ ọbụna dị n'etiti nke ụlọ!
2. Chọọ gị úkwù maka scarves, tablecloths, ma ọ bụ ọbụna pillowcases na ịja gị na agba atụmatụ.
Ị nwere ike iji ihe ị na-ama onwe nro a dresser n'elu ma ọ bụ ọnu gị nightstand, ma ọ bụ ikekwe dina a mara mma shawl n'elu ụkwụ nke bed. Ọ bụrụ na i nwere enwe atụfu Ohiri isi n'elu ihe ndina gị (ma ọ bụrụ na ị na-adịghị, ọ bụ oge na-ezu ohi ha si n'ọnụ ụlọ ọzọ!) ị nwekwara ike kechie a akwa gburugburu Ohiri isi n'ihi na a ọhụrụ anya, na dị nnọọ nchekwa pin ya na azụ.
Jelii agwa Plant (Sedum rubrotinctum) (Photo Ebe E Si Nweta: Wikipedia)
3. tinye a osisi gị ụlọ. Ele anya gburugburu ụlọ gị na-ahụ ma ọ bụrụ na otu n'ime gị ẹdude osisi ga-enwe obi ụtọ na gị ime, mgbe ahụ-akpali ya n'ebe! Ọ bụrụ na i nwere ike ịhụ a osisi njikere maka ngafe, -eme ka otu! Ọtụtụ osisi nwere ike toro site cuttings, ma gị ẹdude houseplants, onye a enyi nwere ike ka ị na bee, ma ọ bụ ọbụna ụfọdụ n'èzí osisi.
Ivy na ọtụtụ ndo groundcovers bụ nnọọ mma houseplants. Ị pụrụ ọbụna relive gị na nwata a bit na-eto eto a ịkpụ nduku, ọkwụrụ bekee, ma ọ bụ karọt n'elu na a tuo! n'ihi na containers, anya n'ime gị kichin cupboards.
Old teapots na iko, iko ọkwá, ọbụna mmiri efere nwere ike ime ka pụrụ iche containers.
4. Tinye irighiri gị ụlọ. M na-a foto nke onye ọ bụla n'ime ụmụ m mgbe ha dị obere na-esote n'akụkụ àkwà m, na mgbe ọ na-eme m ọchị. Olee banyere nghọta gị agbamakwụkwọ ákwà si headboard, ma ọ bụ na-akpa nkata gị agbamakwụkwọ òkù ma ọ bụ agadi ịhụnanya akwụkwọ ozi?
5.tinye senti. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ihe ọ bụla potpourri ma ọ nēsì ísì utọ n'ebe ulo, bee n'elu ụfọdụ oroma peels na-ekwe ka nkụ, mgbe ahụ mix na ihe ọ bụla ụtọ ngwa nri na i nwere gị kọbọd. (Ọ na-ewe a tuo, -agbalị cinnamon, ginger, ma ọ bụ allspice.) Edebe gị potpourri na-emeghe nnukwu efere gị ụlọ ka freshen ma na-akpali!
Mgbe e mesịrị ke ndaeyo, jide n'aka na-agụnye ya okooko osisi gị ụlọ, ma ọ bụrụ na ị na-adịghị Roses ma ọ bụ ndị ọzọ na esi ísì ụtọ okooko osisi na gị yad, n'akụkụ ụzọ daisies nwere ike na-esi isi oké oke!
Nanị ole na ole obere mgbanwe, -enweghị ego abuana, na a ka mma, ka mma unu ebe malitere ma mechie kwa ụbọchị!
Ihe Ị Pụrụ Isi Mụta site na-agbakwụnye Home Interior Summer agba
81923	48 ime, Business, ifuru, Horticulture, Houseplant, osisi, Ịzụ ahịa, otutu ohiri isi
← Ịṅụ kọfị nwere ike Belata Onwe Egwu! Anụ Ọhịa Wolf’ Eti mkpu ákwá Pụrụ ID'd site Computer →